11/25/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Monday, November 25, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ယနေ့ ခေတ်မျက်နှာစာတွင်ကွန်ပျူတာ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာသည် လူသားတုိ့၏နေ့စဉ် လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုဘဝတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုဖြစ်လာ သည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူသားတို့သည် မိမိတို့၏အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေလာကြသည်။ ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာများ၊ ခေတ်မီနည်းပညာ များ၊သမိုင်းဝင်စာပေများစသည့် ဗဟုသုတပေါင်းစုံကို အင်တာနက်တွင် လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေလေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၈ခုနှစ်မှစ၍ အင်တာနက်အသုံးပြု၍ရ သော်လည်းတွင်ကျယ်စွာ အသုံး ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အရပ်သားအစိုးရသစ်တက်လာပြီးနောက်တွင်မှ လူတန်းစားမရွေး အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်လာကြသည်။ ယခုအခါတန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး ” အင်တာနက်အင်တာနက်” ဟူ၍ လူထုကြားတွင် ရေပန်းစားလာပြီ ဖြစ်သည်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ဖြစ်စေ၊ကားစီးရင်းဖြစ်စေ ဖုန်း (သို့) tablet များတကိုင်ကိုင်ဖြင့် ဟိုပွတ်ဒီပွတ်လုပ်နေကြသည့် လူကြီးလူ ငယ်များကို မြန် မာ့နိုင်ငံ ရေး အပြောင်း အလဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပြောင်းအလဲကာလတွင် အားရကျေနပ်ဖွယ်တွေ့မြင်ကြ ရမည်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုကြသည်ဟု ဆိုငြားသော် လည်း သတင်းကြည့်ြ ခင်း၊ ဘောလုံးပွဲဂိုးရလဒ်များ ကြည့် ခြင်း၊ သီချင်းများ Download လုပ်ခြင်းကိုအများဆုံးသုံးပြုလုပ် ကြသည်သာ ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁ဝနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံ အပြောင်းအလဲကာလတွင် Social Network ဟုခေါ်သည့် လူမှုကွန်ရက်များကို ပြည်သူအတော်များများ အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ Twitter ကိုမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွင်ကျယ်စွာ အသုံးမပြုနိုင်ကြသေးသော်လည်း Facebook သည် မြန်မာ့လူနေမှုပုံစံတွင် စနစ်တကျနေ ရာယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ Facebook ကို ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းတွင် ၂ဝဝ၄ခုနှစ်မှ စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်မှ စတင်အသုံးပြု နိုင်ခဲ့သည်။ ” ကျွန်တော့် ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျ က်နှာပေါ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်” ၊ ” ကျွန်မရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာဘယ်လိုပြောထားပါတယ်” ။ “ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကျွန်တော့် ကို ဘယ်လိုပြော ထားပါ တယ်” ။ ” ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုပြောထားလို့ ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန် ပြောလိုက်ရတာပါ” စသည်ဖြင့် သတင်း စာရှင်းလင်း ပွဲများပြု လုပ်၍ တစ်မျိုး၊ အင်တာဗျူးဖြေဆိုရာတွင်တစ် Facebook အကြောင်းသည်မပါမဖြစ်ပါနေသကဲ့သို့ပင်တွေ့ရ သည်။
” နိုင်ငံခြားရောက်နေတော့ အိမ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရတာမျိုး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရတာမျိုးတွေကျတော့ ဖုန်းနဲ့ဆိုရင် ပိုက်ဆံကုန်ပြီ။ စကားပြောချိန်လည်း သိပ်မရဘူး။ ဒီက Social Network တွေ ပေါ်လာတော့ အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်ရတာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရတာ တအားလွယ်သွားပြီ။နောက် အဆက်အသွယ် ပြတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီး တွေ့ရတယ်။ နောက်ကျောင်းသားဘဝမှာ ကဗျာ တွေ ရေးဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်ကိုမှ ပို့ ဖြစ်ဘူး။ အခု Facebook လို Social Network တွေပေါ် လာ တော့ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အရေးအသားပုံစံကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးလို့ရတယ်။ ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ ရင်းနှီးခွင့်ရလာတယ်။ နောက်ပြီး အွန်လိုင်း က နေတစ်ဆင့်ကဗျာတွေပို့ခွင့်ရလာတယ်” ဟုမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့တွင်အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေသောလူငယ် ကဗျာဆရာ ကိုကျော်ဦး(လှိုင်) ကပြော သည်။
လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ရာတွင် ဖုန်းဆိုတာ မလိုလောက်အောင်အထိ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဟု Facebook တည်ထောင်သူ မက်ဇူကာဘက် က ကြွေးကြော်ထားသည်။ လူတစ်ယောက်အကြိုက်ကို Facebook က သိသည်။ ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Like လုပ်လေ့ရှိသော (သို့) comment ဝင်၍ရေး လေ့ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ Status (သို့) Photo များကို ကျွန်တော်တို့၏ News Feed တွင် အမြဲထားပေးသည်။ Facebook အသုံးပြုသူ အများစုမှာ လူငယ်များဖြစ် ရာ လူငယ်တို့၏ အသိဥာဏ်နုနယ်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူကာ နည်း အမျိုးမျိုးဖြင့်သွေးထိုးတတ်သည်။
လူငယ်စာရေးဆရာ သူရဿဝါက “Facebook ရဲ့အားသာချက်ကတော့ သတင်းပဲ။ ညသန်းခေါင် တစ်နေရာရာမှာ မီးလောင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒီလို အချိန်မျိုးမှာလျင်မြန် တဲ့သတင်းပေးပို့မှုကို သတင်းစာက မလုပ်နိုင်သလို၊ ဂျာနယ်ကလည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ Facebook လိုမျိုး Electronic Media တွေကသာ လုပ်နိုင်မှာလေ။ Facebook ရဲ့ အားနည်းချက်က သတင်းပါပဲ။ Print Media လို စိစစ်မှုမလုပ်နိုင်ဘူး။ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေလည်း ပါနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Self Sensor လုပ်နိုင်ပါ မှ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ် Filter လုပ်ထားနိုင်မှတော် ကာကျမယ်။ ဒါတောင် သတင်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲရှိပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ အကြောင်းအရာစုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Facebook လို Socia Network မျိုးမှာ အားသာချက်အားနည်းချက်ပေါင်းစုံ ရှိနိုင်ပါတယ်” ဟုပြောပြခဲ့သည်။
အနုပညာရှင်များအတွက်မူ Facebook သည် ပြည်သူနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ကြားခံနယ်တစ်ခု ဖြစ်သကဲ့သို့ ကြောက်စရာ ကောလာဟလ လွှင့်တတ်သည့် ပါးစပ်ေ ပါက်ကြီးနှင့်လည်း တူပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း တက်သစ်စအနုပညာရှင်များ၏ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းပုံများ၊ အနုပညာဖန် တီးမှုအသစ်များကို ပရိသတ်နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် တင် ပြပေးနိုင်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်းအနုပညာရှင်အချို့၏ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ပရိသတ်ကပါ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာသည် ကို တွေ့ရ သည်။ Facebook ပေါ်မှ Fan များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများ၊ Facebook ပေါ်မှ သီချင်း ခွေကြော်ငြာများစသည်ဖြင့် ကဏ္ဍစုံတွင် Facebook သည် ပါဝင်ပတ်သက် လျက်ရှိသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသော ကဗျာဆရာမလရိပ်ပြာက ” Internet ယဉ်ကျေးမှုက တခြားလူမျိုးတွေဆီမှာ အသားကျနေ ပေ မယ့် မြန်မာ လူမျိုးတွေအနေ နဲ့ နည်းပညာပိုင်းမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါ အခက်အခဲ တချို့တွေ့ရတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေအလွဲသုံး စားလုပ်ပြီးပေါက်ကရ Group တွေထဲထည့် တာမျိုးတွေ စင်ကာပူမှာ ခဏခဏ ကြုံရပါ တယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် Facebook က အဆင်ပြေပါတယ်။ အိမ်က လူတွေနဲ့ စကားပြောလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး ကဗျာတွေတင်မယ်။ ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ ရင်းနှီးခွင့်ရတယ်။ ကိုယ်လေးစားအားကျတဲ့သူတွေကို ခင်ခင်မင်မင်ပြော လို့ဆိုလို့ရတာကောင် ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုမသမာတဲ့ နည်းနဲ့ မသမာတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးချတာမျိုးတွေ၊ အပြင်မှာမတွေ့ဖူး၊ မဆုံဖူးတဲ့လူတွေ ကို ငွေရေး၊ ကြေးရေး ကိစ္စတွေ၊ တခြား ကိစ္စတွေမှာ ကောက် ကြံတာမျိုးတွေကတော့သိပ် အဆင်မပြေဘူး” ဟုပြောပြခဲ့သည်။Facebook ၏ ထူးခြားသောအချက်မှာ လူတိုင်းအနုပညာရှင် ဆန် ဆန်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မိမိခံစားနေရသော စိတ်ခံစားမှုကိုစာကြောင်း လေးများနှင့်ရေးဖွဲ့ကာ Status တင်လိုက်လျှင် မိမိ၏ သူငယ်ချင်းများ၏ အားပေး လက်ခံမှု (Like) နှင့်မှတ်ချက် (Comment) တို့ကိုရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း အနုပညာသမားဖြစ်သွားသကဲ့သို့ ခံစားရစေပါသည်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တွင် ဓာတ် ပုံလေး တစ် ပုံတင်ခြင်း(သို့) စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရေးခြင်းစသည့် အပြင်မိမိဖန်တီးထားသော သီချင်း၊ကဗျာ၊ပန်းချီတို့ကို သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေခံစားခြင်း သည် ပျော် ရွှင်မှု တစ်ခုဖြစ်သလို၊ စိတ်အပန်းဖြေရာလည်း ရောက်ပါသည်။
သို့သော် မလိုလားအပ် သော ပဋိပက္ခများ ဖန်တီးပေး ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ အခြားသော ကိစ္စရပ်များအပေါ် တွင် အမျိုးမျိုး လိမ်လည်လှည့် ဖြားခြင်းသည် မလုပ်သင့်မလုပ် အပ်သော အရာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လူငယ်လူရွယ်များ အနေ ဖြင့်လည်း Facebook ပေါ်တွင်သာ တစ်နေကုန်အချိန်ဖြုန်း မနေဘဲ ပြင်ပ လူ့အဖွဲ့ အစည်းတွင် လည်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ရန် လိုပေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူမှုကွန် ရက်ယဉ်ကျေးမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ပတ် သက်လျက် ရှိ နေပြီဖြစ်သည်။
တရုတ်-ဂျပန်၊ တရုတ်-အမေရိကန် အားပြိုင်မှုများအကြား အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူရမည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကြားညပ်ကာ မြေစာပင် မဖြစ်ရန် လိုအပ်
၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးတာဝန် လက်ခံရယူမည့် မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အင်အားကြီး နိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်-ဂျပန်၊ တရုတ်-အမေရိကန် အားပြိုင်မှုများအကြား ကြားညပ်ကာ မြေစာပင် ဖြစ်မသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ စကားဝိုင်းတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးသည့် ပညာရှင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟန်းဆိုင်ဒယ် ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးအတွက် အကြိုဆွေးနွေးသည့် ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံ စကားဝိုင်းကို နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ ၂၃ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဟန်းဆိုင်ဒယ် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Mr. Achim Munz နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ရယူချိန်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံမှ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေသည့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ပစိဖိတ်ဒေသ တောင်ပိုင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့မြောက်အာရှနှင့် မြောက်အမေရိက ဈေးကွက်များအား အဓိက ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်နေသည့် တောင်တရုတ် ပင်လယ်အရေး ဆွေးနွေးရန် တရုတ်နိုင်ငံမှ သဘောတူညီမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ မြှုပ်နှံလာနေပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကျွန်းစုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်နေသည့် ဂျပန်နိုင်ငံအကြား အားပြိုင်မှုများ ရှိလာနိုင်သည့်အတွက် ပညာရှင်များက ယခုလို မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"တရုတ်နိုင်ငံက ဖိအားပေးရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ ဘရူနိုင်းကို အတုယူရမယ်။ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အာဆီယံ လေးနိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့ရမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်း ထိတွေ့ရမယ်။ အမေရိကန် အပါအ၀င် သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံ အားလုံးနဲ့ ထိတွေ့ပြီး ဒီပလိုမေစီကို ကျင့်သုံးရမယ်။ တရုတ်ကိုတော့ ဆန့်ကျင်လို့ မရဘူး။ ပြီးတော့ ဒီပြဿနာတွေက ၁၀ နှစ်၊ နှစ် ၂၀ နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရတဲ့ ပြဿနာတွေဆိုတော့ လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ ဖြေရှင်းရမယ်။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ရပါမယ်" ဟု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အာဆီယံရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးအောင်ထူးက ပြောကြားသည်။
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးတာဝန်အား ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ရယူစဉ်က တောင်တရုတ် ပင်လယ်နှင့် ဆက်နွှယ်ပြီး အာဆီယံ ၀န်ကြီးများ သဘောတူညီမှုဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်အား တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ထုတ်ပြန်နိုင်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကျန်အာဆီယံ ကိုးနိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံမှုများကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖိအားပေးမှုများ ရှိလာနိုင်သည်ကို ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် မြန်မာမဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေး သိပ္ပံမှ အဖွဲ့ဝင် ဦးကြီးမြင့်က ပြောကြားသည်။
"ကျွန်မတို့ နိုင်ငံက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံလို ဖိအားပေးမှုခံမှာ မဟုတ်သလို အားပြိုင်မှုတွေကြား ညပ်တာမျိုးလည်း အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး" ဟု ဒေါ်မိုးသူဇာက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ပုံရိပ်ဆိုးများ ရှိနေသော်လည်း အများဆုံး မြှုပ်နှံထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှု ပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ ပိတ်ဆို့မှုအချို့ ထားရှိသော်လည်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းမှု ဆိုင်ရာများ စတင်ပြုလုပ်လာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်လာသည့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် အားပြိုင်မှုများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘက်မလိုက် မူဝါဒနျင့် လက်ရှိအနေအထားများအရ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုများ ကြုံတွေ့လာနိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ အကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်မှ ဦးဝင်းအောင်က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
"အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား လက်ထက်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေး စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့် တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် အားပြိုင်မှုတွေ အကြားမှာ အာဆီယံ နစ်မြုပ်သွားမလား စိုးရိမ်နေကြတယ်။ အင်အားကြီး အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်အားပြိုင်မှုမှာ အာဆီယံမြေစာ ဖြစ်မသွားဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ အကိုင်အတွယ် မှားသွားရင် အာဆီယံ ညီညွတ်မှု ပျက်ပြားသွားနိုင်တယ်" ဟု ဦးကြီးမြင့်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ယူချိန်တွင် ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စရပ်များမှာ အာဆီယံ အသိုက်အမြုံ တည်ဆောက်ရေးကို သတ်မှတ်ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအကြား တစ်ကြိမ်မျှ ပြန်လည်သုံးသပ်ရခြင်း မရှိသေးသော ASPC (ASEAN Political Security Community)ကို သုံးသပ်ခြင်း၊ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ခန့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သော အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက်အမြုံ မျှော်မှန်းချက်မှ ကျန်ရှိနေသည်များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ASCC(ASEAN Socio Cul tural Community) သုံးသပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ရေးဆွဲထားသော မူဘောင်များမှာ အာဆီယံ နိုင်ငံများအကြား ချိတ်ဆက်စေမှုကို မည်သို့အကူအညီ ပေးနိုင်မည် ဆိုသည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ရေးအတွက် အရှေ့တီမောနိုင်ငံ၏ လျှောက်ထားမှုကို သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရေး၊ အာဆီယံ နိုင်ငံများအကြား နိုးကြားမှု ရှိစေရန် ဆက်သွယ်မှု အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရေး၊ အမေရိကန်၊ တရုတ်အပါအ၀င် အာဆီယံ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအကြား မျှခြေကို ထိန်းညှိဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ကိစ္စရပ်များအပြင် နိုင်ငံတွင်း ကိစ္စရပ်ဖြစ်သော ရခိုင်အရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
(၂၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာ လွှဲပြောင်းရယူစဉ် (Photo:AFP)
လေ့လာချက် တစ်ခုအရ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်က ထွက်တဲ့ chemical compounds တစ်မျိုးရဲ့ ရနံ့က စိတ်လှုပ် ရှားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အမျိုးသား တွေကို ဆွဲဆောင် နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်လို့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အဖို့ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံနေရပြီ ဆိုရင် ဒါဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းတဲ့ သဘာဝက ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်နာကို အမှတ်တွေ အရမ်း မပေးမိခင် ခဏလေး နေပါဦး။ ဒီလို ဆွဲဆောင်နိုင်တာ အမှန်တော့ သင့်ကိုယ်က ထွက်တဲ့ chemical တစ်မျိုး ကြောင့်ပါပဲ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က pheromones အမည်ရတဲ့ chemical compounds တွေအလိုအလျောက် ထွက်နေ ပါတယ်။ pheromones ကဂရိဘာသာမှ ဆင်းသက် လာတာ ဖြစ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အရာတွေ တစ်နေရာ ကနေ တစ်နေရာကို သယ်ဆောင် ပေးတယ်လို့ အမည်ရ ပါတယ်။ ဒီ chemical တွေက လိင်မှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးမှာ အဓိက ဆောင်ရွက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နှာခေါင်း အတွင်းက ဆဲလ်တွေ ထဲမှာ အာရုံခံ ပြီးနောက် ဦးနှောက်ကို အချက်အလက်တွေ ပို့ဆောင် ပေးပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန် တွေနဲ့ အင်းဆက် တွေကလည်းဒီ chemical ကိုထုတ်လွှတ် နိုင်ကြပြီး ဒီ chemical ကတဆင့် မျိုးပွားမှုတွေ လုပ်ဆောင် ကြတာမို့ သူတို့မှာ စကားပြော စရာတောင် မလိုအပ်ပါဘူး။ pheromones ရဲ့နောက်ကွယ်က သိပ္ပံပညာ ကလည်း ယနေ့တိုင် ငြင်းခုန်စရာ အဖြစ် ရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် အမျိုးသား တစ်ယောက်က အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်တဲ့ ရနံ့ကို အာရုံခံမှု ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဒွိဟအဖြစ် ရှိနေဆဲပါပဲ။ pheromones တစ်မျိုးတည်းက လိင်မှုကိစ္စ ရွေးချယ်မှု အတွက် အဓိက ကျသလား ဆိုတာက စမ်းသပ်ဖို့ ခက်ခဲဆဲပါ။
ဒါပေမယ့် ရေမွှေးနဲ့ အမွှေးနံ့သာ ထုတ်လုပ်သူ တွေကိုတော့ မပြောမိ ပါစေနဲ့။ သူတို့က ရေမွှေးရဲ့ sexy ဖြစ်မှု လျို့ဝှက်ချက်ကို ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ pheromones ပါဝင်တဲ့ ရေမွှေး အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိရည်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ နီးစပ် စေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဥပမာ အနံ့စူးစူး ရေမွှေးကို အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီး တွေက အမျိုးသားတွေအပေါ် တက်ကြွတဲ့ ခံစားမှုကို ပေးစေပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ အမျိုးသား တွေထက် အမျိုးသမီးတွေက ဒီလိုရနံ့ကို အဆ၁၀၀၀ အာရုံခံနိုင်ပြီး သူမက စကား မပြောရတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဒီအမွှေးရနံ့ကို ပြန်လည် ဖြန့်ဝေ ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ရေမွှေးတွေက အမျိုးသား တွေကို မဆွဲဆောင်ဘူး ဆိုရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ။ သိပ္ပံပညာရှင် တွေကတော့ အမျိုးသား တွေရဲ့ လိင်စိတ်ဟာ pumpkin pie၊ doughnuts၊ lavender နဲ့ cinnamon rolls အနံ့တွေ ရှုမိရင် ကြွတတ်ကြောင်း တွေ့ရှိထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် lavender အကိုင်း တစ်ကိုင်းကို မီးမြိုက်ပြီး အနံ့ခံ တာထက် အမျိုးသမီး တွေရဲ့ ဆွဲဆောင်တဲ့ ရနံ့က ပိုမိုပြီး လိင်စိတ် ကြွစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမွှေးရနံ့ တွေဟာ နေရာဒေသကို လိုက်ပြီးတော့လည်း သက်ရောက်မှု ကွာခြား ပါတယ်။ အီသီယိုပီးယားမှာ နွားကထွက်တဲ့ ရနံ့က အစွမ်းထက်တဲ့ ရေမွှေးထက် ပိုကောင်း ပါတယ်။ နွားကထွက်တဲ့ ရနံ့က မျိုးပွားမှု ကိုလည်း ကောင်းစေပြီး နွားချေးကို အမျိုးသား တွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိမ်းကျံပြီး အမျိုးသမီးတွေက ခေါင်းမှာ လိမ်းကြ ပါတယ်။ သင့်အနေ နဲ့တော့ စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ pheromone ရေမွှေးကို ရွေးချယ် နိုင်သလို မသုံးဘဲလည်း နေနိုင်ပါတယ်။ သင်ရှုသွင်း လိုက်တဲ့ လေနဲ့အတူ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို ဆွဲဆောင် နိုင်ဖို့ ရေမွှေးကုမ္ပဏီ တွေကတော့ ကြော်ငြာ နေဦးမှာပါပဲ။ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မရှိသေး သရွေ့တော့ အနံ့မဲ့တဲ့ ရေမွှေးတွေ ထက်စာရင် အနံ့သင်းသင်း ရေမွှေးက ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို pheromone ရေမွှေးတွေက အမျိုးသား တစ်ယောက်ကို တိုက်ရိုက် ဆွဲဆောင်မှု မရှိနိုင် ပေမယ့် သင်လွှတ် လိုက်တဲ့ ရနံ့က လိင်စိတ် ပိုကြွလာစေ မှာတော့ အမှန်ပါပဲ။
Source - HowStuffWorks, Images from Glamour, thefashionrecords.com
Six Packs တဲ့။ ယောကျာင်္းလေးတွေ အတွက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဗိုက်မှာ အဆီထက် စာရင် muscles တွေနဲ့ Six Packs ကို လိုချင် ကြမှာပါ။ ဒါကို ဘယ်လို ရအောင် လုပ်ကြမလဲ။
Six Packs တဲ့။ ယောကျာင်္းလေးတွေ အတွက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဗိုက်မှာ အဆီထက် စာရင် muscles တွေနဲ့ Six Packs ကိုလိုချင် ကြမှာပါ။ ဒါကို ဘယ်လို ရအောင် လုပ်ကြမလဲ။ မှန်ကန်တဲ့ နည်းစနစ် တစ်ခုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။
Fitness Community ရဲ့ဆိုရိုး တစ်ခု ရှိပါတယ်။ "six packs are made in the kitchen, not the gym." တဲ့။ six packs ကိုလိုချင်ရင် အားကစား ခန်းမတွေမှာ ကျင့်ရမှာ မဟုတ်ဘဲ မီးဖိုချောင် မှာပါတဲ့။ လူတိုင်းမှာ ဗိုက်ကြွက်သားတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရာတစ်ခုခု အောက်မှာ ဖုံးနေလို့ မမြင်ရတာပါ။ တကယ့်လို့ အဲ့အဆီတွေ အောက်မှာ ဖုံးနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို မြင်ချင်တယ် ဆိုရင် အပေါ်က အဆီတွေကို အရင် ဖယ်ထုတ် ပစ်ရမှာပါ။ တစ်နေ့ကို အိပ်ထမတင် (crunches) အခါတစ်ထောင် လောက်လုပ်ရင် ဒီအဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းဖို့ လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ကြမှာပါ။ သေချာ အားသွန်ခွန်စိုက် ထိအောင် မလုပ်ရင် အခါတစ်ထောင် ဆိုတာ မလုံလောက် ပါဘူး။ ကိုယ်စားသောက် လိုက်တဲ့ ကယ်လိုရီ ထက်ပိုတဲ့ ပမာဏကို သုံးပစ်လိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ်က အဆီအဖြစ်နဲ့ သိမ်းဆည်း ထားတဲ့ ပိုလျှံနေတဲ့ ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်း ပစ်ဖို့အတင်း စေခိုင်းမှာပါ။ မှန်ကန်တဲ့ အချိုးအဆနဲ့ စားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမယ် ဆိုတာ သင်သိပါတယ်။
diet ကအရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ နောက်ထပ် သင့်ရဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပိုမို ကြီးမားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက် ရှိပါ သေးတယ်။ အရွယ်အစား ဆိုတာ ခွန်အားနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပုံစံကို မှန်ကန်စေပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ရတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ မောပန်းတာတွေ၊ အထူးသဖြင့် သင့်နောက်ကျောကို ဒဏ်ပိစေ တာတွေကို သက်သာ စေဖို့အတွက် အလေးမ နည်းစနစ် မှန်ကန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုပြီး သယ်မ နိုင်တာက သင့်ဘ၀မှာ အရေးကြုံ လာတဲ့အခါ အသုံးဝင် လာမှာပါ။ ပိုတောင့်တင်းတဲ့၊ ပိုကြီးမားတဲ့ ကြွက်သား တွေက တဖြေးဖြေးနဲ့ သိမ်ငယ် ချည့်နဲ့သွား တတ်ပါတယ်။ ဒါကို ကြာရှည် ထိန်းထားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကြွက်သားတွေက ကယ်လိုရီ တွေကို လောင်ကျွမ်း စေပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ များများရှိလေ ကယ်လိုရီကို လောင်ကျွမ်းတဲ့ နေရာ၊ ဖယ်ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ ပိုထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ကြွက်သားတွေ များများ ရှိတာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၀ိတ်ပေါကြီးလို့ ဖြစ်နေမှာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကြွက်သား တွေထွက်လာဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူ ပါဘူး။ တကယ့် ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကြွက်သားတွေ ရှိတဲ့သူတွေက ဒါတွေကို မတော်တဆ ရလာတာ မဟုတ်သလို သင်လည်း အဲ့လိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်က ကြွက်သားတွေ ထွက်အောင် ကစားပေမယ့် ပြောင်းပြန်ရလဒ်တွေ ထွက်လာ တတ်ပါတယ်။ လူတွေက နေ့တိုင်း ကစားရင် ဖြစ်လာမှာပါလို့ ဆိုကြပါတယ်။ သင်က နေ့တိုင်း လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာ လုပ်သင့်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပေါင်လောက် အလေးကို တစ်နေ့ကို အကြိမ် ငါးရာလောက် မနေတာမျိုးက အလကားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ muscle fibers တွေကို ပြန်ကုစားဖို့၊ ပြန်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ ကြီးထွားလာဖို့ အတွက် အနာတော့ ခံရမှာပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ စသွားတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အတိုင်းအတာကို သိစေသလို အနာတရ တွေကလည်း ကာကွယ် ပေးပါတယ်။ အိပ်ထမတင် (crunches) အခါတစ်ရာ သုံးကြိမ်အစား ၈-၁၂ခါလောက်နဲ့ sit-up၊ leg lift နဲ့တခြား ၀မ်းဗိုက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အလေးတုံး တွေပါ ထည့်သွင်း ကစားမယ် ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ၀မ်းအောက်ပိုင်းနဲ့ ဘေးဘက်က ခါးလှည့်တဲ့ ကြွက်သားတွေကိုပါ ထိရောက် စေပါတယ်။ စာရေးတဲ့ သူကတော့ ၀မ်းဗိုက် အပေါ်နဲ့ အလယ်ပိုင်း၊ နောက်ဘေး ဘက်ပိုင်း၊ ပြီးတော့မှ အောက်ပိုင်း ကိုကစားဖို့ အကြံပေး ထားပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်က သင့်ရဲ့ six-pack zone ကိုထိစေပါတယ်။ ၀မ်းဗိုက် ကြွက်သား အတွက် ကစားတဲ့ နေရာမှာ twist တွေပါ ထည့်ကစားတာက အကျိုးရှိတယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အကြိမ် အရေအတွက် များများနဲ့ အလေးချိန် ပေါ့တာတွေနဲ့ ကစားပေး တာက ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ fitness community ကလည်း ဒီကိစ္စ အတွက် ငြင်းခုံ နေတုန်းပါ။ ဒါမျိုး လုပ်တာက သက်လုံပိုင်းနဲ့ ခံနိုင်ရည် ရှိလာဖို့ တည်ဆောက်တဲ့ အပိုင်းမှာ ကောင်းကျိုး ရှိစေပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်း တွေကလည်း သင့်ရဲ့ ဗိုက်ကြွက်သား တွေကို သန်မာကြံ့ခိုင် စေပါတယ်။ အကြိမ်များများ လုပ်နိုင်ရင်တော့ muscle size ကိုတက်လာ စေမှာပါ။ ဒီလို သက်သက်သာသာ ကစားတာ တွေက ကြာရှည် မခံတာကြောင့် အထိရောက်ဆုံး နည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကြိမ် အရေအတွက် နည်းနည်းနဲ့ အလေးချိန် များများ သုံးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက six pack အတွက် ပိုပြီး သင့်တော်သလို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းမှုနဲ့ ကြာရှည် ခံနိုင်မှုမှာ ပိုကောင်းပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း အပြင် diet ကိုလည်း လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦး။ အားလုံးပဲ six pack တွေပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေ။
Images from t-nation, xtworkoutroutines.com, gizmodo, dailyfitnesstip.com, Source - Gizmodo
(၁) တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုအဖော်ပြုပေးသူမရှိတဲ့
သီချင်းနားထောင်ပါ၊ စာဖတ်ပါ၊ စာရေးပါ။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။
(၂) တကယ်လို့ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ ထောင့်တစ်နေရာမှာ
ဒါမှမဟုတ် စောင်ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ငိုလိုက်ပါ။ တခြားလူရဲ့နှစ်သိမ့်မှုတွေ
မလိုပါဘူး။ ငိုပြီးတာနဲ့ စိတ်တွေလန်းဆန်းလာလိမ့်မယ်။
(၃) စိတ်ထိခိုက်တဲ့အခါ ယုံကြည်ရတဲ့သူငယ်ချင်းကို ရင်ဖွင့်ပါ။
တစ်ယောက်တည်း စိတ်ညစ်စရာတွေကို ရင်ထဲသိုဝှက်ထားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုပြီး
(၄) မပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကင်ပြာကို မော်ကြည့်ပါ။ ကြယ်တွေကို
ရေတွက်ပါ။ အပြောကျယ်တဲ့ကောင်းကင်မှာ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
အချစ်တစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ "ငါ မဆိုးဘူး" ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်
(၅) မိသားစုအပါအဝင် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့သူရဲ့ မွေးနေ့ကိုမှတ်ထားပါ။
ကိုယ့်မွေးနေ့ကိုလည်း မှတ်ထားပါ။ မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်ပေးသူမရှိရင်
ဝမ်းမနည်းပါနဲ့။ လှပတဲ့လက်ဆောင်တွေဝယ်ပြီး အဖေ၊ အမေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၆) အားလပ်ချိန်မှာ ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ပါ၊
စာကောင်းလေးတွေရှာဖတ်ပါ။ ခဏတာ အိပ်စက်ပါ။
(၇) အခုချိန်ကစပြီး ထက်မြက်သူဖြစ်ပါစေ။ ငါ့ကိုလွမ်းလား? ချစ်လားလို့
တစ်ဘက်သားကို သွားမမေ့ပါနဲ့။ တကယ်လို့ သူလွမ်းရင်၊ သူချစ်ရင်
သူဘာသာသူပြောလိမ့်မယ်။ ကိုယ်သွားမေးနေရင် သူဘဝင်မြင့်သွားလိမ့်မယ်။
(၈) ကိစ္စတချို့၊ လူတချို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ် သိပ်မရက်စက်မိစေနဲ့။ ဥပမာ-
ထမင်းမစားတာ၊ ငိုတာ၊ အခန်းအောင်းတာ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာ... ဒါတွေက
လူနုံ့လူအတွေ လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေမှာ နုံ့အတာပဲ
သူ့မကောင်းကြောင်း မပြောပါနဲ့။ ပြောခဲ့ရင်လည်း ကောင်းကြောင်းပဲပြောပါ။
မိတ်ဆွေတစ်ဦးပိုတာက ရန်သူတစ်ယောက်တိုးတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
(၁ဝ) တစ်ခါတလေမှာ ကားပိုင်းဆက်တွေ ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်
မှိန်းမသွားရဘူး။ တစ်ခါတလေမှာ ဆံပင်တွေ ရှုပ်ပွကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်
အချိန်အခါနဲ့ ကိုက်ညီရမယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေ ဆဲကြည့်လို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းရှိချိန် ဒါမှမဟုတ်
(၁၁) အတတ်နိုင်ဆုံး လူတွေနဲ့မငြင်းခုန်မိအောင် ကြိုးစားပါ။
အရူးတစ်ယောက်နဲ့တူပြီး အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သည်းခံပြီး
ပြဿနာရင်းမြစ်ကိုရှာပါ။ စိတ်တွေတည်ငြိမ်ချိန်မှ ဖြေရှင်းပါ။
ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသိဖို့ အချိန်တအောင့်လောက် လိုအပ်တယ်။
အဲဒီအချိန်တအောင့်က နှစ်ချီကြာနိုင်သလို တချို့က တစ်သက်၊ တစ်ဘဝအချိန်ကို
အသုံးပြုပြီးမှ တစ်ဘက်သားကို နားလည်ကြရတယ်။
pheromone နည်းနည်းလျော့ပါ အသိဉာဏ်များများပိုပါ
ချစ်နေချိန်မှာ မျက်စိနဲ့ သေချာလေ့လာရတဲ့အပြင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း
ကိုက်ညှိကြည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ချစ်စမှာ လူတွေက မျက်ကန်းဆန်ပြီး
တစ်ဘက်သားကို အကောင်းပဲမြင်တတ်ကြတယ်။ ဒါတွေက ချစ်နေချိန်မှာ
လူ့ခန္ဓာကထွက်တဲ့ pheromoneကြောင့် မျက်ကန်းဆန်စေတာဖြစ်တယ်။ pheromone
ကြောင့် ချစ်နေချိန်မှာ တစ်ဘက်သားရဲ့အလှ၊ အကောင်းကိုပဲမြင်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် "အချစ်မှာမျက်စိမရှိ"ဆိုတဲ့ စကားပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ချစ်သူဖြစ်ပြီး သက်တမ်းအနည်းငယ်အကြာမှာ pheromoneက ပုံမှန်အနေအထားကို
ပြန်ရောက်သွားတယ်။ ဒီလိုအနေအထားဖြစ်ဖို့ နှစ်ဝက်ကျော်လောက် ကြာတတ်တယ်။
အဲဒီအချိန်ကျရင် တစ်ဘက်သားကို ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်မချစ်၊
သင့်မသင့်တော်ဆိုတာကို လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ချစ်သူတွေက
နှစ်ဝက်တောင်မခံဘဲ pheromone လျော့နည်းချိန်မှာ လမ်းခွဲကြရတယ်။ ဒါကြောင့်
အချစ်မှာ ချစ်ဖို့ သံစဉ်တွေလိုအပ်တယ်။ ချစ်စမှာ ဖြေးဖြေးချင်းနဲ့
ချစ်သံစဉ်တွေ အဆုံးထိ တီးခတ်သီဆိုနိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်
ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ "ကိုယ်နဲ့မတူချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်"နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေခဲ့ရင် ခဏလောက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်တယ်
တစ်ကြိမ်မှာတော့ ဇီဇာကြောင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
သူနဲ့ နိုင်ငံခြားအတူ သွားလည်တဲ့အခေါက် မိတ်ဆွေတစ်ဦးအိမ်မှာ
ကျွန်မတို့ထမင်းအတူစားခဲ့ကြတယ်။ ထမင်းစားပြီးနောက် သူကမျက်ရိပ်နဲ့
ကျွန်မကို ပန်းကန်ဆေးကူသင့်ကြောင်းပြတယ်။ မိတ်ဆွေအိမ်မှာ
သူတစ်ပါးဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်တာမျိုးကို နှစ်သက်တာကြောင့် သူ့စိတ်ကြိုက်
ပန်းကန်တွေအများကြီးဆေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါနဲ့တင် သူကမကျေနပ်ခဲ့ဘူး။
အဲဒီခရီးမှာ ကျွန်မတို့ အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းခုန်ခဲ့ကြရတယ်။ ခရီးတစ်လျှောက်
တင်းမာနေတဲ့ သူ့မျက်ရိပ်မျက်ကဲကိုပဲ ကျွန်မကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့
ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်ရောက်တာနဲ့ သူ့ကိုဖြတ်ပစ်မယ်လို့
အဲဒီတစ်ခေါက်မှာ အချစ်ကို စိတ်အစွဲအလမ်းနဲ့ပဲ ချစ်လို့မရမှန်း
ကျွန်မသိလိုက်ရတယ်။ "ခရီးဝေးမှ မြင်းရဲ့ခံနိုင်အားကိုသိတယ်။
ပေါင်းသင်းတာကြာမှာ လူ့စိတ်ကိုသိတယ်" ဆိုသလိုမျိုး
သူ့စိတ်ကိုလုံးလုံးသိပြီး သူနဲ့မတူချင်ခဲ့ရင် စောစောစီးစီး
လမ်းခွဲလိုက်ကြတာပိုကောင်းတယ်။ တကယ်လို့ သူ့ရဲ့အလေ့အထကို သိပြီးသည့်တိုင်
သူ့ကိုဆက်ချစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် သူဟာ ကိုယ်တကယ်ပေးဆပ်သင့်သူဖြစ်ခဲ့ပါ
အခက်အခဲကြုံချိန်မှ အချစ်ရဲ့ရုပ်ပုံစစ်ကို မြင်ရတယ်
အချစ်ခရီးလမ်းက နေရောင်ခြည်ပဲ ထွန်းတောက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေ
မတော်တဆတွေနဲ့လည်း ကြုံရတတ်တယ်။ ဒါဟာ အချစ်ကိုစမ်းသပ်တဲ့ အကောင်းဆုံး
အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ယောက် ဆေးရုံတက်ရတယ် ဒါမှမဟုတ်
ကုမ္ပဏီက ရုတ်တရက် အရေးအကြောင်းရှိလာတယ် ဒီလိုမတော်တဆတွေက
မတော်တဆဖြစ်ချိန် ကိုယ့်ကိစ္စကို သူ့ကိစ္စလိုသဘောထားပြီး
ကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ချစ်သူ၊ ကိုယ့်လုံခြုံမှု၊ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို
ု ကျွန်မတို့က ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့
ချစ်သင့်ပါတယ်။ ချစ်ရတာလည်း တန်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မတော်တဆဖြစ်ချိန် အလုပ်များတာကိုအကြောင်းပြပြီး
"အဆင်ပြေလား?"ဆိုပြီး ကိုယ့်ဆီပြန်လာတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးကိုတော့
အချစ်ကိုစွန့်ခွါချိန် အလျှင်စလိုမလုပ်ဘဲ ပြောင်းလဲဖို့
သူ့ကိုအချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ အခုချိန် သူ့ဆီမှာ အားနည်းချက်တွေ
တပုံကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ပြောင်းလဲပြုပြင်ဖို့ သူကိုယ်တိုင်
သင်ယူလိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် သူဟာ ကိုယ့်အတွက်အဖော်ကောင်းတစ်ယောက်
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအဖေလိုမျိုး နုရွယ်စဉ်မှာ ဗွေရှုပ်ခဲ့တယ်။
အသက်ကြီးလာတော့ အိမ်အတွက်၊ မိသားစုအတွက် တစ်လျှောက်လုံး
အမေကိုပြန်ပေးဆပ်တတ်ဖို့ သူသင်ယူခဲ့တယ်။ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ သားသမီး၊
လင်ယောက်ျားအတွက် အရာရာကို ပေးဆပ်စတေးခံခဲ့တဲ့အမေက နောက်ဆုံးမှ
သူ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်အတွက် အဖော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖေ့အပေါ်ထားတဲ့
အမေရဲ့အချစ်က အမြစ်တွယ်ခိုင်မြဲခဲ့တယ်။ ငြင်းခုန်မှုတွေမပြတ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အမေမတုန်လှုပ်ခဲ့ဘူး။ အမေအတွက်တဘက်သားရဲ့အချစ်ကို နားလည်ဖို့ သူ့တစ်သက်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်
Credit by: စိတ်ကူးပျော်ရာ
ချောမွတ် နူးညံ့ အမွှေးအမျှင် ကင်းစင်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့
Posted by drmyochit Monday, November 25, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ချောမွတ် နူးညံ့ အမွှေးအမျှင် ကင်းစင်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အမွှေး ဖယ်ရှားတဲ့ နည်းလမ်း ကောင်းကို ရှာဖွေနေ ပါသလား။ ဒီမှာ နည်းလေးတွေ ဖော်ပြပေး ထားပါတယ်။
ချောမွတ် နူးညံ့ အမွှေးအမျှင် ကင်းစင်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘရိတ်ဓားနဲ့ ရိတ်တာထက် ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေ ကြပါ တယ်။ အစဉ် အလာအရ အမွှေး မရှိရမဲ့ နေရာထက် ပိုပြီးအမွေး မရှိချင်တာ အမျိုးသား တွေမှာဆို မျက်နှာနဲ့ အမျိုးသမီး တွေမှာဆို ခြေ ထောက်နဲ့ ချိုင်းအောက်လို နေရာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လို နေရာက အမွှေးတွေ ဖယ်ရှား မိတယ် ဆိုရင် မွှေးညင်းပေါက် ကိုကျယ် တာပဲ ဖြစ်စေ ပါတယ်။
မျက်နှာနဲ့ ခန္ဒာကိုယ် အမွှေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အတွက် တခြား ရွေးချယ်စရာ နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဖြင့် မွှေးညင်းအိတ်ကို အားနည်း စေခြင်း (electrolysis)၊ လေဆာဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း (laser hair removal)၊ ဖယောင်းဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း (Waxing) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ waxing ကတော့ အချိန်ကြာကြာ ခံပါတယ်။ ကျန်နှစ်မျိုး ကတော့ အမြဲတမ်း အတွက်ပေါ့။ ကုန်ကျငွေ၊ safty risks၊ treatment တစ်ခုပြီးဖို့ အတွက် အချိန်နဲ့ အကြိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ် သင့်ပါတယ်။ အချို့နည်းက ဈေးကြီး ပါတယ်။ အချို့က အချိန်အပိုင်း အခြားအလိုက်၊ section အဆင့်ဆင့် လုပ်ရပါတယ်။ အချို့က ထာဝရ ခံပါတယ်။ information ပိုသိထားရင် ဘယ်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ် ရမလဲ ပိုသိလာပါ လိမ့်မယ်။ လူကြိုက် အများဆုံး နည်းလမ်း ကတော့ ရိတ်တာက အမွှေး ဖယ်ရှားတဲ့ နည်းလမ်း ဟောင်းကြီးပါ။ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုမက ကြာရှည်နေတဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဈေးအသက် သာဆုံးနဲ့ အလျင်မြန်ဆုံး မလိုချင်တဲ့ အမွှေး ဖယ်ရှားနည်းပါ။ ဘရိတ်ဓားနဲ့ shaving cream တစ်ဗူး ဆိုတာ အနီးအနား ဆိုင်မှာတင် လွယ်လွယ် ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။ Shaving ကလတ်တလော အတွက် ကောင်းပေမယ့် ချို့ယွင်းချက် အများကြီး ရှိပါတယ်။ အားနည်းချက် ကတော့ မကြာခဏ ရိတ်ပေး ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အမွှေး ငုတ်စိလေးတွေ မရှိအောင် နေ့စဉ် ရိတ်ရတယ်။ ဒီလို လုပ်ခြင်းက အရေပြားကို နာကျင် နီရဲစေပြီး အနီစက်၊ ယားယံခြင်း၊ ယောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်စေ ပါတယ်။
ရေရှည် ခံတဲ့ နည်းလမ်း တွေကတော့ လျှပ်စစ်ဖြင့် မွှေးညင်းအိတ်ကို အားနည်းစေခြင်း (electrolysis) ကတော့ ယခုအခါ ရေရှည်ခံ နည်းလမ်းလို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းပါ။ အပ်သေးသေးနဲ့ မွှေးညင်းအိတ်ကို လျှပ်စစ် ဖြတ်သန်းပြီး အမွှေးအရင်းကို ဖျက်စီးတဲ့ နည်းပါ။ ဒီလို မွှေးညင်းအိတ်ကို ဖျက်စီးခြင်း အားဖြင့် အမွှေး ထပ်မထွက် နိုင်တော့ပဲ ကြာရှည်ခံတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အချိန်အထူး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပြီး တစ်ပင် ချင်းစီကို လုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် section များများ ယူရပါတယ်။ လုပ်မဲ့ နေရာပေါ် မူတည်ပြီး ရာပေါင်း များစွာ ဒါမှမဟုတ် ထောင်ပေါင်း များစွာသော အပ်တွေနဲ့ ထိုးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်တဲ့လူ သိပ်မရှိပါဘူး။ လေဆာဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း (laser hair removal) -ခန္ဒာကိုယ် ဘယ်နေရာက အမွှေးအမျှင် မဆိုဖယ်ရှား လို့ရတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးကော၊ အမျိုးသားပါ လူကြိုက် များပါတယ်။ လူကြိုက် များတဲ့ အကြောင်းရင်းက နာကျင်မှု ပမာဏက Electrolysis နဲ့ Waxing ထက်ပိုပြီး သိသိသာသာ သက်သာ ပါတယ်။ ပိုးသားလို အသားအရေ ရဖို့ ပိုလွယ်ကူတဲ့ နည်းစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ Laser hair removal devices ကိုဝယ်ပြီး ကိုယ့်အိမ်မှာ တောင်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Laser hair removal မှာလဲ အားနည်းချက် ရှိပါတယ်။ ခန္ဒာကိုယ် ဘယ်နေရာက အမွှေး ဖယ်ရှားမလဲ၊ ဘယ်လောက် ဖယ်ရှား မလဲဆို တာပေါ် မူတည်ပြီး တခြားနည်းလမ်း ထက် ဈေးပိုကြီး ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဈေးသက်သာအောင် လုပ်လို့ ရတဲ့နည်း တွေရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အရောင်ဖျော့ အသားအရေနဲ့ အရောင်ရင့် အမွှေး ရှိသူအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လိုအပ် သလောက် section ယူရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရက်သတ္တပတ် တော်တော်ကြာ နိုင်ပါတယ်။
ဖယောင်းဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း (Waxing) - ဒီနည်းလမ်းနဲ့ အမွှေး ဖယ်ရှားတဲ့ ပုံစံ ရှိနေတာ ကြာပါပြီ။ ဖယောင်း ပူပူကို အမွှေးကင်း လိုတဲ နေရာကို သုတ်ပြီး ဖယ်ရတဲ့ နည်းပါ။ အ၀တ်စကို ဖယောင်း သုတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ကပ်ပြီး ဆက်ကနဲ ပြန်ခွာ ရပါတယ်။ အမွှေးတွေက ဖယောင်းမှာ ကပ်ပြီး အရင်းကနေ ဆောင့်ဆွဲပြီး အနုတ်ခံ ရတာပါ။ ဒီနည်းလမ်း ကတော့ လျင်လျင်မြန်မြန် အကျိုး သက်ရောက် ပေမယ့် pain ရှိပါတယ်။ Spa မှာရော၊ အိမ်မှာပါ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှန် Shaving လုပ်တာထက် ပိုပြီးချောမွေ့တဲ့ အသားအရေကို ရစေပါတယ်။ အားနည်းချက် တွေကလည်း သိသာပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးရင် Tutorials ၊ Videos ကိုကြည့်ပြီး လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Waxing လုပ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ နာကျင်မှုကို မခံနိုင်လို့ patients တွေက တခြားနည်းလမ်းကို ပိုနှစ်သက် ပါတယ်။ အမြဲတမ်း effective ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်လို့ နှစ်ပတ် သုံးပတ် လောက်ကြာလို့ အမွှေး ပြန်ရှည် လာရင် ထပ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သကြားဖြင့် အမွှေး ဖယ်ရှားခြင်း (Sugering) - Waxing နဲ့နည်းလမ်း တူတူပါပဲ။ ဖယောင်းပူ အစား သကြားစစ်စစ် ကလုပ်တဲ့ Gel/ကော်လို ဟာမျိုးကို အသုံးပြု တာပါ။ သကြားကို အခြေခံပြီး ကုန်စုံဆိုင် မှာတင် ၀ယ်လို့တဲ့ ဈေးမကြီးတဲ့၊ ပါဝင်ပစ္စည်း အသုံးပြုပြီး ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ အတွက် တချို့က ဒီနည်းလမ်းကို နှစ်သက် ပါတယ်။ Sugering က Waxing ထက်အနာ သက်သာ တဲ့အပြင် ဈေးလဲ ပိုသက်သာရုံ သာမက အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ အတွက် ပိုအဆင် ပြေပါတယ်။ Epilators - တခြား နာကျင်တဲ့ အမွှေး ဖယ်ရှားနည်း ကတော့ လျှပ်စစ် ကိရိယာနဲ့ အမွှေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အရင်းကနေ ဆွဲနုတ်တဲ့ နည်းပါ။ ဒီလျှပ်စစ် ကိရိယာက သယ်ရ လွယ်ကူပြီး အိမ်မှာ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဆေးဆိုင်မှာ တစ်ခါ တစ်လေ ၀ယ်လို့ရပြီး အွန်လိုင်း ရှာလို့ ရပါတယ်။ Shaving ထက် effective ပိုဖြစ်ပြီး ကြာကြာ ပိုခံသော်လည်း ကိရိယာ နဲ့အတူ နာကျင်မှု ရှိတော့ အချို့အတွက် ပုံမှန် အသုံးပြုဖို့ အဟန့် အတား ဖြစ်နေပါတယ်။
ကဲကိုယ့်နဲ့ အသုံးတဲ့မယ့် နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့ပြီး အမွှေးအမျှင် ကင်းတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင် ကြပါစေ။
Images from facebook, alchemyofthegoddess, laserremovaltips, nonohairremovalreviewsz. Source - hairremovalmethods.org
" စိန်" အကြောင်းသိကောင်းစရာ.....
စိန်ဈေးနှုံးကို သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါ အချက်၎ချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ 4C ဟု အတိုကောက် မှတ်နိုင် သည်။
ဥပမာစိန်၏အရွယ်မှာ၃ကာရက်ရှိပြီးအရောင်မှာအညိုရောင်ဖြစ်နေသည်။ စိန်ကိုရှေးစိန်သွေးကွက်ဖြင့်သွေးထားမည်။သာမန်မျက်စေ့(မှန်ဘီလူးမပါ )ကြည့်ပါကစိန်အတွင်းသားနှင့် မျက်နှာပြင်တွင်အမည်းစက်နှင့်အနာရှိနေပါက စိန်အရွယ်၁ကာရက်ရှိပြီး အ၀ါရောင် အနေမရှိသော စိန်ကသာလျှင် ပိုတန်ဖိုးရှိလေသည်။
ရတနာများ၏ အလေးချိန် ကိုဖော်ပြရာတွင် ကာရက်ချိန်ကို သုံးပါသည် မြန်မာပြည်တွင် ရတီချိန်ကို သုံးသော် လည်း ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင်ကာရက်ကိုသာသုံးပါသည်။ ၁ကာရက်=၁.၁ရတီ
F&IF အဆင့်များသည်၁၀ဆမှန်ဘီလူးဖြင့်ကြည့်ပါ ကလုံးဝ အနာအဆာမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ VVS1 မှာ သာမန် မျက်စိဖြင့်အနာမမြင်နိုင်ပဲ၁၀ဆချဲ့မှန်ဘီလူးဖြင့်ကြည့်လျှင် အပ်ခေါင်းလောက်ရှိသောအမှုန်ကို
ကျောက်မျက်ပညာရှင်ကတွေ့နိုင်ပါသည်။ မြန်မာအခေါ်အရအစင်အသန့်ဟုခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဈေးကွက်တွင်VVS1 VVS2 ဟူ၍ထပ်မံခွဲထားပါသည်။ VVS2တွင်အမှုန်၂စက်၃စက်ခန့်ပါနိုင်ပါသည်။ VSSတွင်လည်းVS1 VS2 ဟူ၍ထပ်ခွဲပါသည်။အစက်အပြောက်အနာအဆာများပါနိုင်ပါသေးသည်။ S1တွင်လည်း S1, S2, S3ဟူ၍ခွဲထားပါသည်။ အနာကြီးအမည်းစက်များပါနိုင်ပြီးမျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။Iတွင်လည်း I1,I2ဟူ၍ခွဲကြပါသည် ။မြန်မာအခေါ်ရေခဲသားဟုခေါ်သည်။ေ ရခဲတုံးကိုကြည့်
မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် ပွင့်အားကောင်းလျှင်(မီးအားကောင်းလျှင်) ကြိုက်ကြသည်။ စိန်၏သဘောမှာအကြမ်းအားဖြင့်အနည်းငယ်ဝါနေလျှင်မီးပိုအားကောင်းသည်။
Facetedဟုခေါ်သည်။ ၄င်းအပိုကွက်၁ကွက်ပါခြင်းသည်လည်းစိန်၏ဈေးနှုံးကိုကျစေပါသည်။ သာမန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပေ။ မြန်မာပြည်တွင်ရှေးအခါကစိန်များကို ၅၇ကွက်နည်းဖြင့်မသွေးကြပါ။ စိန်အလေးချိန်မလျော့စေရန်နှင့် နည်းပညာအားနည်းမှုများကြောင့်ဖြစ်သလိုသွေးထားကြလေသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံပန်းမကျဖြစ်ပြီးစိန်၏ပွင့်အားနှင့် အလှအပကိုမဖော်ပြနိုင်ပေ။ ယနေ့ခေတ်တွင် အပါးရိုင်းပုံကျ၅၇ကွက်စိန်ကိုသာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ရှေးစိန်များအရွယ်ကြီးပြီးမလှပသဖြင့်တန်ဖိုးနည်းပါသည်။
မြန်မာအခေါ်အရ I color ကိုအဖြူဟုခေါ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူများသာ- G-Iကိုမှန်ဘီလူးဖြင့်ကြည့်ပါက အနည်းငယ်ဝါနေကြောင်းမြင်နိုင်ပါသည် ၊မြန်မာလူမျိုးများ၏အကြိုက်မှာအနည်းငယ်ဝါပြီဲး J-N အရောင်၊သန့်စင်မှုအဆင့် VVS2ကိုကြိုက်ကြသည်။ အရောင်နိမ့်ပြီးသန့်စင်မှုမြင့်သည်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြပါသည်။ အမေရိကားတွင်မူလူအများစုမှာအရောင်မြင့်င်္ပြီ F, G, H သန့်စင်မှုအဆင့် S1, Iကိုသာအများဆုံးဝယ်ယူဝတ်ဆင်ကြသည်။
ဈေးကွက်တွင်မူ D, E, Fမှာ၎င်း၏ ရှားပါးမှုကြောင့် တန်ဖိုးကျခြင်းမရှိသဖြင့် ရတနာစု သူများ ၀ယ်သင့်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂေဇက် သြဂုတ် ၂၀၀၆ တွင်ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ရနံ့ကုထုံး (scent therapy)
သိပ္ပံပညာရှင် တွေက ရနံ့ကုထုံး (scent therapy) ကိုအသုံးပြုပြီး လူရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ထဲက အရာတစ်ခုခု အပေါ် ကြောက် တဲ့ စိတ်ကို အောင်မြင်စွာ ပယ်ဖျက်ပေး နိုင်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
သင်က မြွေတို့ ခွေးတို့ ပင့်ကူတို့ကို မြင်ရင် ကြောက်ပြီး တုန်နေ တတ်ပါ သလား။ Northwestern University မှသုသေသီ တွေက အိပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မတူညီတဲ့ အမွှေးရနံ့ တွေကို သုံးပြီး အမွှေးရနံ့ ကုထုံးနဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေကို ပြောင်းလဲ နိုင်တဲ့ နည်းစနစ် တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ ကြပါပြီ။
စမ်းသပ်ချက် များအရ သိပံ္ပပညာရှင် တွေပာာ လူနာကို သူကြောက်တတ်တဲ့ မျက်နှာပုံစံ တစ်ခုခုကို အဲဒီမျက်နှာနဲ့ အတူ အနံ့ကိုပါ ပြပြီးနောက် ဓာတ်လိုက်အောင် လုပ်လိုက် ပါတယ်။ လူနာပာာ ဒီမျက်နှာပုံ ကိုသာမက အနံ့ကိုပါ ကြောက်ရွံ့ တတ်သွား ကြပါတယ်။ အနံ့ပာာ လူနာ အိပ်နေ စဉ် မှာတောင် ကြောက်စိတ်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး shock ရရ သွားတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း လုပ်ပါများ လာတဲ့အခါ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကိုပါ ပျောက်ကွယ်သွား စေပါတယ်။ အနံ့ကြောင့် ကြောက်စိတ်တွေ ပျောက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ ရလဒ် ထွက်လာ တယ်လို့ ဆိုရမှာ ပါပဲ။
လေ့လာမှုပာာ အနံ့နှင့် စိတ်ထိခိုက် လှုပ်ရှားခြင်း (emotion) တို့ကြားက ခိုင်မာတဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို မီးမောင်းထိုး ပြလိုက်တာပါ။ တချို့ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေ အကြံပြု တာက အနံ့ခံ အဖုလေး တွေပာာ စိတ်ထိခိုက် လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ မှတ်ဥာဏ်တို့ အလုပ်လုပ်ရာ ဖြစ်တဲ့ amygdala နဲ့ hippocampus တို့နဲ့ နီးကပ်တာကြောင့် ဒီလို ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ အခြား စမ်းသပ်မှု တစ်ခု ကလည်း ဆက်သွယ်မှုကို အသေအချာ စစ်ဆေး ပြီးပါပြီ။ မနှစ်က သိပ္ပံပညာရှင် တွေပာာ အမျိုးသမီး အယောက် ၂၀ကို တုန်လှုပ်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ဗီဒီယို တွေကို အခန်းထဲတွင် cassis အနံ့တွေနဲ့ အတူ ပြသခဲ့ ပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ် အကြာမှာတော့ အမျိုးသမီး တွေပာာ ဗီဒီယို ထဲက အကြာင်းအရာ တွေကို ပြန်စဉ်းစား ခိုင်းပြီး အချို့ကို cassis အနံ့ နောက်တစ်ခါ ရှုခိုင်း ပါတယ်။ cassis အနံ့ကို ရှုရတဲ့ သူတွေပာာ မရှုရတဲ့ သူတွေထက် ပိုပြီး ဗီဒီယို ထဲက အကြောင်းအရာက တွေကို မှတ်မိ ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆက်သွယ်မှုပာာ ပိုပြီး စိတ်ဝင် စားစရာ ကောင်းလာ ပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ် အကြာက Norwegian အနုပညာရှင် Sissel Tolaas ဆိုသူပာာ ကြောက်ရွံ့စိတ်ကို လျှော့ချ ပေးတဲ့ stimuli တွေကို ထိုးသွင်းပြီးနောက် ဓာတုဗေဒ နည်းအရ ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ကာ လူတွေကို စုဆောင်း ခဲ့ပါတယ်။ microencapsulation လို့ခေါ်တဲ့ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ပာာ Scratch'n'sniff ထုတ်ကုန်တွေ ပြုလုပ်တာနဲ့ တူညီတဲ့ အနံ့မျိုးကို ပြခန်းထဲ ထည့်ထား ပါတယ်။ ပြခန်း ထဲမှာတော့ လူတွေပာာ နံရံကို ပွတ်နိုင် ခြစ်နိုင်ပြီး ကြောက်ရွံ့မှုကို ခံစားရ ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အနုပညာ အပေါ် တုန့်ပြန်မှုပာာ တော်တော် ကြီးကို ကွဲပြားပြီး တော်တော် များများမှာ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါတွေရဲ့ တုန့်ပြန်ခြင်း (visceral reaction)ကို မခံနိုင် ကြပါဘူး။ တချို့ကတော့ အခန်းထဲ ကိုတောင် လမ်းမလျှောက်နိုင် ကြတော့ ပါဘူး။ သိပ္ပံ ပညာရှင် တွေပာာ လူတွေပာာ အနံကို ဘာမှ မလုပ်နိုင် ပေမယ့် တုန့်ပြန် နိုင်တယ် ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီး သိရှိခဲ့ ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက် တွေက အဲဒီလိုပဲ ရှုပ်ထွေး နေတာ ပါပဲ။
Images from cdn.theatlantic, i.dailymail, img.gawkerassets. Source: gizmodo.com
ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒအရ အင်ဂိုလာနိုင်ငံတွင်
Posted by drmyochit Monday, November 25, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒအရ “ အင်ဂိုလာနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ကို တရားဝင် ပိတ်ပင်ပြီး ၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဗလီများအားလုံးကိုလည်း တစ်လုံးမကျန် ဖျက်သိမ်းပစ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ” သတင်း ရရှိပါတယ်။
အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ကလည်း ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းမှ “ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ဆိုတာဟာ လိုရာဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေ တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ၊ ဘာသာတရား တစ်ခုအဖြစ် ၎င်းတို့အနေဖြင့် လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါကြောင်း ” တရားဝင် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
လုအန်ဒမြို့တော်ရှိ ဗလီနှစ်လုံးကိုလည်း ဖျက်သိမ်းရန် အမိန့်ရထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်ဝန်က ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရှိ “ ခွေးလို ဝက်လို သားပေါက်နေသည့် မွတ်ကုလားယုတ်များ၏ မှိုလိုပေါက်နေသော ဗလီများအားလုံး ” ကို အာဖရိကနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ လို ယခုချက်ခြင်း တရားဝင် အမြန် မဖျက်သိမ်းနိုင်လျှင်တောင်
ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒအမှန်ကို လွှတ်တော်တွင် တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး အာဏာရ အစိုးရအဖွဲ့မှ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်
ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒမဲပေးထားလို့ လွှတ်တော်အမတ်များ ဖြစ်နေသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများမှ တဆင့်
“ တရားမ၀င် ဆောက်လုပ်ထားသော ဗလီများ နှင့် တရားမ၀င် ဆောက်လုပ်ထားသော အာရေဗျီ စာသင်ကျောင်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် အမြန်ဖျက်သိမ်းပေးရေး အဆိုအား လွှတ်တော်၌ အဆိုတင်သွင်းပေးပါရန် ”
မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမတ်မင်းများ ထံ ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြပါလို့ တိုင်းပြည် ၊ အမျိုး ၊ ဘာသာ ၊ သာသနာတော်ကြီး နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အကျိုး မျှော်မှန်း၍ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
An African country prohibits Islam on its soil and destroyed the mosques (by popular demand)
A fact that seems unusual but it is far from it. An African country that prohibits Islam on its territory ! This isacountry that is the opposite of Senegal religious components. In Senegal, we have 95% Muslims and 5% Christians. And in this African country, about 95% of the population is Christian, fourth belongs to Protestant churches founded during the colonial period, especially the Evangelical Congregational Church. And it is these which motivate the authorities of that country to ban the Muslim religion they consideracult.
And before yesterday, Tuesday, November 19, is the minister of culture of the country that shows the radicalization of Islam countries facing the minister of Culture, Rosa CruzeSilva said. "Regarding Islam, the legalization process has not been approved by the Ministry of Justice and Human Rights, their mosques would be closed until further notice."
Recall that the main religion is Christianity in Angola.
Credit : Xibaaru
Posted by drmyochit Monday, November 25, 2013, under ထုတ်ပြန်ချက် | 1 comment
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆း၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်
ယနေ့မြန်မာ စံတော်ချိန်(၀၅း၃၀)နာရီ အချိန်တိုင်းထွာချက် များ အရ ယမန်နေ့ ကကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း၊“လီဟာ“(LEHAR)သည်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့ တောင်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကပ္ပလီကျွန်းစု၊ ပို့လ်ဘလဲယားမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင်(၃၀)ခန့်၊မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့ ၏တောင်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင်(၁၄၀)ခန့် ၊ ပုသိမ်မြို့ ၏အနောက်တောင် ဘက် မိုင်(၃၂၀)ခန့် အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းသည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဟုခန့်မှန်းရပါသည်။
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း၏ အရှိန်ကြောင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင်နေရာ ကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်ရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး၊လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်း ကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)ထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အ၀ါရောင်အဆင့်သာရှိပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေမရှိဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊
သင်္ဘောများအနေဖြင့်မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ရှောင်ရှားရန်လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကြောက်မက်ဖွယ် အကောင်းဆုံး မူးယစ်ဆေး
ဘိန်းဖြူ အစားထိုး အဖြစ် သုံးစွဲနေကြတဲ့ "Krokodil" ကကမ္ဘာ့ကြောက်မက်ဖွယ် အကောင်းဆုံး မူးယစ်ဆေးပါ။ flesh-eating drug လို့တောင် တင်စား ခေါ်နေကြပြီး တားဆီးဖို့ အသည်းအသန် ကြိုးစား နေကြပါတယ်။
ဘိန်းဖြူဆိုတဲ့ မူးယစ်ဆေးဟာ အရင်လို လွယ်လွယ် ရောင်းဝယ်လို့ မရတာကြောင့် တခြားဆေးဝါး တွေကို အစားထိုး အသုံးချ လာပါတယ်။ အခု အခါလည်း US မှာတဖြည်းဖြည်း သုံးစွဲမှု ကြီးမားလာပြီး အန္တရာယ် အဆင့်ရှိတဲ့ ဆေးတစ်မျိုး အကြောင်းကို ဖော်ပြသွား မှာပါ။ အရင်က မူးယစ်ဆေး ဆိုတာ ဘိန်းဖြူ တစ်မျိုး တည်းလို့ သိကြတာပါ။ ဆေးပြား တွေလို ပုံစံမျိုး နဲ့ကော၊ အမှုန့်နဲ့ကော သုံးစွဲကြ သလို ဆေးလိပ်လို ဟာ မျိုး မှာလည်း ထည့်လိပ် ပြီးတော့ ရှုကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ကိုယ်ထဲ ထိုးသွင်း ကြပါတယ်။ တရား ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပြီး နိုင်ငံတကာက အစွမ်းကုန် တိုက်ဖျက်လာ တာကြောင့် ပေါ်ပေါ်တင်တင် ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်ဖို့ ခက်လာ ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘိန်းဖြူ လိုမျိုးလည်း ဇယားမရှုပ်၊ တရားဝင်လည်း ၀ယ်လို့ရတဲ့၊ အာနိသင်လည်း တူတူနီးပါး ရတဲ့ဟာမျိုး တွေကို အစားထိုး လာကြ ပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုရရင် ကော်ရှုကြ တာမျိုးပါ။ နောက်တစ်မျိုး ကတော့ လူကို မူးစေတဲ့ အာနိသင် ရှိတဲ့ တရားဝင်ဆေး တွေပါ။ ဆေးဆိုင်လို ဟာမျိုး မှာတောင် ၀ယ်လို့ရလို့ အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ် ရရင် လူတွေဟာ မူးယစ်ဆေးကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးစွဲကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ယခုအခါ မှာလည်း ကိုယ်ထဲကို ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ထိုးသွင်းပြီး သုံးစွဲတဲ့ "Krokodil" ဆိုတဲ့ မူးယစ်ဆေး တစ်မျိုး ပေါ်လာ ပါတယ်။ မူရင်း ထင် ရှားတဲ့ Russia ကလာတဲ့ ဒီမူးယစ်ဆေးဟာ ရုရှားလို မိကျောင်းလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ US က Chicago ဆင်ဖြေဖုံး ရပ်ကွက် တွေမှာ ၈ဒေါ် လာ လောက်နဲ့ ၀ယ်လို့ရပြီး ၂၅ ကနေ ၃၀ဒေါ်လာ အထိ ပေးရတဲ့ ဘိန်းဖြူနဲ့ စာရင် အများကြီး ဈေးသက်သာ တာကြောင့် လူကြိုက်များ ပါတယ်။ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး Codeine ဆေးပြား၊ Iodine နဲ့တခြားသော ပေါပေါရတဲ့ အရည် တချို့ကနေ လွယ်လွယ် ပြုလုပ်ထား တဲ့ဒီ Krokodil ဆေးဟာ Morphine လိုမျိုး အစွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မူးယစ်ဆေး မဆို ကောင်းကျိုး မပေးပါဘူး။ အဲဒီဆေးဟာ အ သားတွေကို ပုပ်ပြဲစေ သလို အသား တွေကို အစိမ်းရောင် သဲ့သဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းစေ ပါတယ်။ အဆိုးဆုံး ကတော့ အသားတွေ ပုပ်ပြဲလာ တာကြောင့် အရေပြား အောက်က အရိုးတွေ၊ ကြွက်သားတွေ အတိုင်းသား မြင်ရပြီး ပြင်ပရောဂါ တွေပါ ကူးစက်လာ တာပါပဲ။ flesh-eating drug လို့တင်စား ခေါ်ဝေါ် နေကြပါတယ်။
အခုဆိုရင် Krokodile ပျော်စံရာ Chicago ကဆရာဝန် တွေဟာ ဆေးရဲ့ ဘေးဥပါဒ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကို အသည်းအသန် ကုသနေ ရတဲ့ ဘ၀ ရောက်နေ ပါတယ်။ ကံဆိုးလို့ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ ဆိုသလိုပါပဲ။ Arizona နဲ့ Utah ပြည်နယ် တွေကိုလဲ အဲဒီဆေးတွေ ပျံ့နှံ့ နေပါပြီ။ မီဒီယာ တွေရော၊ အစိုးရ ကပါ သတိပြု မိလာ တာကြောင့် မကြာခင်မှာ ထိရောက်တဲ့ စစ်ဆင်ရေး တွေနဲ့ ဖြေရှင်း သွားဖို့ ကိုတော့ မျှော်လင့် ရပါဦးမယ်။ ဘိန်းဖြူမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မူးယစ် စေတဲ့ ဆေးမှန်သမျှ အားလုံး ဝေးဝေးက ရှောင်သင့် ပါတယ်။ ရှောင်ကြဉ်ရုံ တင်မကပဲ သူတစ်ပါးတွေ ရောင်းဝယ်တာ၊ သုံးစွဲတာတွေ တွေ့ရှိမိရင် သက်ဆိုင်ရာကို အမြန် သတိပေး သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ မူးယစ်ဆေး ကင်းစင်တဲ့ သာယာတဲ့ လောကကြီး တစ်ခု ဖြစ်လာ မှာပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ် လိုက်ရ ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မူမမှန် လိင်စိတ် စုံမက်ခြင်း
Posted by drmyochit Monday, November 25, 2013, under ကျန်းမာရေး | 1 comment
မူမမှန်သော လိင်စိတ် စုံမက်ခြင်း Paraphilias သည်အလွန့် အလွန် ရှားပါးသော ရောဂါစု တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၅နှစ် မှ ၂၅နှစ် အရွယ် အမျိုးသား များတွင် အများဆုံး ဖြစ်လေ့ ရှိပါသည်။
အမေရိကန် စိတ် ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်များ အသင်းကြီးမှ ထုတ်ဝေသော စိတ်ရောဂါ အညွှန်း (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) တွင် "လိင် စိတ်ကြွ ခြင်းသို့ ရောက်ရှိ နိုင်သော ပြင်းထန် သော စုံမက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် တစ်ပါးသူကို စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ထိခိုက် စေသည့် အတိုင်း အတာ ထိ ဖြစ်မှ သာလျှင် ရောဂါဟု သတ်မှတ်သည်။" ဟုအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို ထားပါသည်။ လူတိုင်းတွင် ဆန်းပြားသော လိင်စိတ် ရှိတတ် ကြသည်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား သဖြင့် ရောဂါဟု သတ်မှတ်ရန် မိမိ သို့မ ဟုတ် သူတပါးအား ထိခိုက် စေသည် ဟူသည့် အချက် လိုအပ် ပါသည်။ အခြားသော စိတ်ရောဂါ များနည်းတူ ရောဂါ လက္ခဏာ အနည်းဆုံး ခြောက်လ ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ လူမှု ဆက်ဆံရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေ့စဉ်ဘဝ တို့တွင် ထိခိုက် လာသည့် အနေအထား ရောက်မှ သာလျှင် ရောဂါဟု အမည် တပ်၍ ရပါသည်။
မူမမှန် လိင်စိတ် စုံမက်ခြင်း ရောဂါစု (Paraphilias)
မူမမှန်သော လိင်စိတ် စုံမက်ခြင်းတွင် ဖော်ချွတ် ပြခြင်း (Exhibitionism)၊ သက်မဲ့ အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုကို လိင်စိတ် အလို့ငှာ တပ်မက်ခြင်း (Fetishism)၊ ပွတ်သပ်ခြင်း (Frotteurism)၊ ကလေး များကို တပ်မက်ခြင်း (Pedophilia)၊ အနာတရ ဖြစ်ပြီး လိင်စိတ် ကြွစေခြင်း (Sexual masochism)၊ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ပြီး လိင်စိတ် ကြွစေခြင်း (Sexual sadism)၊ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်၏ အဝတ် အစားများ ဝတ်ရန် နှစ်သက်ခြင်း (Transvestism) နှင့်ချောင်းကြည့်ခြင်း (Voyeurism - Peeping Tom) စသည့် ရောဂါ အခြေ အနေ ရှစ်မျိုးတို့ ပါဝင် ပါသည်။
ဖော်ချွတ်ပြ သူများမှာ အမျိုးသား များ ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသမီး များကို ပြသလေ့ ရှိပါသည်။ သက်မဲ့ အရာ ဝတ္ထု တစ်ခုခုကို လိင်စိတ် အလို့ငှာ တပ်မက်သူ များသည် ခြေဖဝါး စသော ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ဖိနပ်၊ အတွင်းခံ စသော သက်မဲ့ အရာဝတ္ထု များကို တွေ့မြင်ရုံ၊ ကိုင်ထိရုံဖြင့် ပြင်းပြသော လိင်စိတ် ကြွခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြ သူများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ ပွတ်သပ်ကြ သူများသည် အများ အားဖြင့် လူစည် ကားရာ နေရာ များတွင် သူတပါးအား ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ လိင်စိတ် သက်သက်ဖြင့် ပွတ်သပ် အာသာဖြေ ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကလေးငယ် များကို တပ်မက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အပျိုဖော်၊ လူပျိုဖော် မဝင် သေးသော ကလေးငယ် များကို လိင်စိတ် အလို့ငှာ တပ်မက်ကြပြီး ပြုလုပ်သူသည် အနည်းဆုံး အသက် ဆယ့်ခြောက်နှစ် ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး ကလေး ငယ်နှင့် အနည်းဆုံး အသက် ငါးနှစ် ကွာခြား ရမည်ဟု ရည်ညွှန်း စာအုပ်တွင် ပါရှိပါသည်။
အနာတရ ဖြစ်ပြီး လိင်စိတ် ကြွအောင် ပြုလုပ်သူ များနှင့် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ပြီး လိင်စိတ် အာသာဖြေ သူများမှာမူ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကြိုးတုတ်ခြင်း၊ လည်ပင်း ညှစ်ခြင်း စသည့် အန္တရာယ် ကြီးပြီး ရက်စက်သည့် အပြုအမူ များကို မိမိကိုယ်ကို လည်းကောင်း၊ တပါးသူကို လည်းကောင်း ပြုလုပ်ပြီး လိင်စိတ်ကြွ အာသာဖြေ သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းမူမမှန်သော လိင်စိတ်သည် အသက် အန္တရာယ် ကြီးပြီး လူကို သေစေ နိုင်လောက် သော သာဓက များလည်း များစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်၏ အဝတ် အစားများ ဝတ်ရန် နှစ်သက် သူများကို ယခင်က လိင်ကွဲ နှစ်သက်သူ အမျိုးသားများ အတွက် သာဟု သတ်မှတ် ထားပြီး နောက်ဆုံး ထုတ် ရည်ညွှန်း စာအုပ်တွင် လိင်တူ၊ လိင်ကွဲ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အားလုံးကို သတ်မှတ် နိုင်သည်ဟု ပြောင်းလဲ ပါရှိပါသည်။ ချောင်းကြည့် သူများမှာ ရေချိုးစဉ်၊ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေစဉ်၊ အဝတ် လဲချိန်၊ လိင်ဆက်ဆံ နေချိန်တို့တွင် လိင်အင်္ဂါ သို့မဟုတ် ကာမ စပ်ယှက်မှု တို့ကို စောင့်ကြည့်ပြီး အာသာ ဖြေ ကြသူ များဟု သတ်မှတ် ပါသည်။
ရောဂါ အကြောင်းရင်းခံ (Pathophysiology)
မူမမှန်သော လိင်စိတ် စုံမက်ခြင်း ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်း များကို သီအိုရီ မျိုးစုံ ထုတ်ပြီး ရှင်းလင်း ကြသော် လည်း မည်သည့် သီအိုရီကမှ ပြည့်စုံသော အဖြေကို မပေးနိုင် သေးပေ။ စိတ်ပညာ ဘာသာ ရပ်၏ ဖခင်ကြီး Sigmund Freud ၏စိတ်ကို ခွဲခြမ်း လေ့လာ သည့် သီအိုရီ (Psychoanalytical Theory) အရ မိတ်ဖက် ရှာခြင်း (Courtship) တွင် အဖော် ရှာခြင်း၊ အထိ အတွေ့ မရှိမီ အဆင့် (စကားပြော ကြည့်ခြင်း၊ ကြူခြင်း)၊ ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် လိင်ဆက် ဆံခြင်း ဟူ၍ အဆင့် လေးဆင့် ရှိရာ မူမမှန်သော စုံမက် ခြင်းသည် အဆင့် တစ်ဆင့်စီ တိုင်းတွင် ပုံမှန် မိတ်ဖက် ရှာသည့် အပြု အမူ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခဲ့၍ သော် လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတား အဆီးများ ရှိခဲ့၍ သော် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင် သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤသီအိုရီ အရ ချောင်းကြည့် ခြင်းဖြင့် စိတ် အာသာ ဖြေတတ် သူများသည် ပထမ အဆင့် ဖြစ်သည့် မိတ်ဖက် ရှာခြင်းတွင် ပြဿနာများ ရှိခဲ့၍ ဖြစ်နိုင် သည်ဟု ယူဆရသည်။ ယောင်္ကျားလေး ကလေး ငယ်များ လိင်စိတ် သတ်မှတ် ချိန်တွင် မိခင် ဖြစ်သူက လိင်မတူ၍ 'ကျား' လိင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်ဟု ဖော်ချွတ် ပြခြင်းဖြင့် လိင်စိတ် ဖြေဖျောက် တတ်သူ များက ၎င်းတို့၏ မသိစိတ်တွင် ယူဆကြ သောကြောင့် ဖော်ချွတ် ပြသပြီး 'မ' လိင်တို့၏ အသိ အမှတ် ပြုမှုကို ရယူကြ သည်ဟု စိတ်ကို ခွဲခြမ်း လေ့လာသည့် သီအိုရီက ဆိုသည်။ ပွတ်သပ် ခြင်းဖြင့် လိင်စိတ် ဖြေဖျောက် သူများ မှာမူ ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ခြင်း အဆင့်တွင် အလွန်အကျူး တပ်မက် ခြင်းကြောင့် ဟုယူဆ ရသည်။
ဥပဒေ ရေးရာနှင့် ငြိစွန်းခြင်း (Legal implications)
မူမမှန်သော လိင်စိတ် စုံမက်ကြ သူများသည် ထိုအပြုအမူ တို့ကြောင့် ဥပဒေ အရ အရေးယူ ခံရနိုင် သည်ကို သိရှိကြ သော်လည်း၊ လူမှုရေး နယ်ပယ်တွင် အရှုံ့ချ ခံရမည် ကိုပင် စိတ်မပူ ကြဘဲ မိမိတို့ ပြုသော အပြုအမူ၏ စွန့်စားဖွယ် ကောင်းမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကောင်းမှု တို့တွင် သာယာ လာသော ကြောင့် ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြုမူ ကြသည် ကိုလည်း လေ့လာမှု များအရ သိရှိလာ ရပါသေးသည်။ မိမိပြု လိုက်သည့် အပြုအမူ ထက် ထိုအပြု အမူကို ပြုလုပ် လိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသော စိတ်လှုပ်ရှား မှုက လိင်စိတ် အာသာ ပြေမှုကို ဖြစ်စေ သည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်း အပြု အမူ များသည် လူမှု ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် မသင့်လျော် သည့်အပြင် အချို့သော တပ်မက်ခြင်း များသည် အသက် အန္တရာယ် ကိုပါ ထိခိုက်နိုင် သောကြောင့် အရေးယူရန် ဥပဒေများ ထားရှိ ပါသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် မူမမှန် လိင်စိတ် တပ်မက်မှု အားလုံးကို ရာဇ သတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၇ ဖြင့် အရေးယူ နိုင်ပါသည်။ ပုဒ်မ ၃၇၇တွင် မူမမှန် လိင်စိတ် တပ်မက်ခြင်း အပြင် ဓမ္မတာနှင့် ဆန့်ကျင် သော လိင်တူ လိင်ကွဲ ဆက်ဆံမှု (Homosexuality, Oral sex, Anal sex) အားလုံး ပါရှိပြီး တစ်သက် တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ် သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် တို့ကို ချမှတ် နိုင်ပါ သည်။
ရောဂါ ဖော်ထုတ် အမည် တပ်ခြင်း (Diagnosis)
မူမမှန်သော လိင်စိတ်ကို ပင်ရင်း စိတ်ရောဂါ တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ကြ သည့်အပြင် စိတ်ကစဉ့် ကလျား ရောဂါ၊ အရက်စွဲ ရောဂါ၊ ဉာဏ်ရည် မမီခြင်း၊ စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းခြင်း စသည့် အခြားစိတ် ရောဂါ များ၏ ရောဂါ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်နိုင် သောကြောင့် အခြားသော ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည် တို့ကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုအပ် ပါသည်။ ထို့အပြင် ဦးနှောက် ဆစ်ဖလစ်၊ ခုခံအား ကျဆင်းမှု ကူးစက် ရောဂါ (AIDS)၊ ဦးနှောက် တွင်း ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဦးနှောက် တွင်း အကျိတ် အလုံးများ ဖြစ်ခြင်း တို့ကြောင့်လည်း မူမမှန်သော လိင်စိတ် စုံမက်ခြင်း ဖြစ်နိုင် သောကြောင့် ရောဂါ သမိုင်းကြောင်း မေးခြင်းနှင့် လူနာကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးချိန် တို့တွင် ၎င်းရောဂါ တွေကိုပါ ရှာဖွေ ကြည့်ရန်မှာ အလွန် အရေးကြီး လှပါသည်။ မူမမှန်သော လိင်စိတ် စုံမက်သည့် ရောဂါရှိသူ တို့သည် မိမိတို့၏ စိတ်ဆန္ဒကို မထိန်းချုပ် နိုင်ကြဘဲ စိတ်ဖိစီးမှု များလာ တတ်ကြပြီး ထိုစိတ်ဖိစီးမှု များကို ဖြေဖျောက် ရန် သက်ဆိုင်ရာ အပြုအမူ များကို ပြုလုပ် တတ် ကြသဖြင့် ဝေဒနာရှင် ကိုယ်တိုင် တွင်လည်း စိတ်ဖိစီးမှု အတိုင်း အတာ တစ်ခု အထိ ရှိကြသည်ကို လူမှု အသိုင်း အဝိုင်းက နားလည် သတိပြု ရန်လည်း လိုအပ်လှ ပေသည်။
ကုသရန် နည်းလမ်းများ (Clinical management)
မူမမှန် လိင်စိတ် ရှိသူတို့ကို ကုသရာတွင် အခြားသော စိတ်ရောဂါ များကို ကုသသည့် နည်းလမ်း များနည်းတူ ဆေးပေး ကုသခြင်း (Biological approach)၊ မိမိစိတ်ကို သိမြင် ထိန်းချုပ် နိုင်စေရန် အားပေးသည့် စိတ်ကုထုံး (Psychological approach) နှင့်လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြန်လည် ဝင်ဆန့် နိုင်စေရန် လူမှုရေး ကုထုံး (Social approach) စသည့် (Bio-psycho-social approach) နည်းလမ်း သုံးသွယ်ဖြင့် ကုသကြ ရပါသည်။ ဝေဒနာရှင်၊ စိတ်ရောဂါ ဆရာဝန် (Psychiatrist)၊ စိတ် ပညာရှင် (Clinical psychologist)၊ မိသားစု၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် စသူ တို့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင် လူထုကပါ တွဲဖက် ကုသမှသာ အမှန်တကယ် ထိရောက်မှု ရှိပါသည်။ ဝေဒနာရှင် ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် တပါးသူ တို့ကို အသက် အန္တရာယ် ရှိစေ နိုင်သော မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ကဲ့သို့ အခြေ အနေ အားလုံး အတွက် စိတ် ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာ အဖြစ် ကုသ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးဝါးဖြင့် ကုသမှုတွင် စိတ်ကျ ပျောက်ဆေး (Antidepressants)၊ လိင်စိတ်ကို လျှော့ချ ပေးသည့် ဆေးတို့ကို ကျွမ်းကျင် သော စိတ်ရောဂါ ကု ဆရာဝန်က တာဝန်ယူ ကုသ ရပါသည်။ စိတ်ကုထုံးဖြင့် ကုသ ရာတွင် မိမိ၏ လိင်စိတ် မူမမှန်မှုကို သတိပြု နားလည် စေပြီး ထိန်းချုပ် နိုင်စေရန် ကူညီရ သည့်အပြင် မူမမှန်သည့် စွဲလမ်း မှုများ နေရာတွင် လူမှု ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် လက်သင့် ခံနိုင်သော လိင်စိတ် လှုံ့ဆော်သည့် အရာများကို အစားထိုး စေခြင်း တို့ဖြင့် ဝေဒနာရှင်၏ လိင်စိတ်ကို တစ်ဆင့်ချင်း ပုံသွင်းယူပြီး မူမမှန် စွဲလမ်းမှုကို သက်သာ စေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယခင် အလားတူ ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ ဖူးပြီး ကုသ ပျောက်ကင်း သွားသူ များနှင့် တွေ့ဆုံ စကားပြော စေခြင်း သည်လည်း စိတ်ရောဂါ ကုသ ရေး၏ အရေး ပါသော အခန်း ကဏ္ဍ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းဝေဒနာရှင် အများစုသည် လူမှု ဆက်ဆံရေးတွင် အခက်အခဲ ရှိသူများ ဖြစ်တတ် ကြသဖြင့် တစ်ကိုယ်တည်း နေလျှင် မူမမှန် စုံမက် မှုများ ပြန်ဖြစ်လာ နိုင်သောကြောင့် လူမှုရေး၊ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး စသည် တို့ကိုလည်း သင်ကြား ပေးရန် လိုအပ် ပါသည်။ လူမှု ပတ်ဝန်း ကျင် ကလည်း မူမမှန်သော စုံမက် မှုသည် စိတ်ရောဂါ အခြေအနေ တစ်ခု ဖြစ်သည်ကို နားလည် သိရှိရန် လိုအပ်ပြီး ပတ်ဝန်း ကျင်မှ ကြဉ်ထား ခြင်းမျိုး မပြု လုပ်ဘဲ စိတ်ကျန်း မာရေး အသိဖြင့် ကူညီ ပေးကြ ရန်လည်း အလွန် အရေးကြီး လှပါသည်။
(1) Medscape - Paraphilias
(2) Wikipedia - Paraphilias
(3) American Psychiatrist Association Paraphilia Fact Sheet
(4) Myanmar - The Penal Code
Images from www.nytimes.com, freakingnews, iconolo.gy, http://lenti-1-3-9.webs.com/, deviatnart REF; Myanmar Youth Media
ဂိမ်းကစား တာဟာ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို ပိုကြီး လာစေနိုင်
ဂိမ်းကစား တာဟာ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို ပိုကြီး လာစေနိုင်ပြီး ပိုမိုထက်မြက် လာလား ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ် လို့ အငြင်းပွား နေဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် Entertainment တစ်ခု ဆိုတာထက် ပိုလာပါပြီ။
ဗီဒီယိုဂိမ်း ကစားတာဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ပိုပြီး ထက်မြက် လာအောင် ကူညီနိုင်လား ဆိုတဲ့ အချက်ကို အရင်လေ့လာ ချက်တွေ အရ သေချာ အတည်မပြု နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လေ့လာချက် အသစ်တွေ အရတော့ ဂိမ်းကစားခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အချို့သော အစိတ် အပိုင်း တွေကို ပိုမိုကြီးမား လာစေတယ် လို့ဆိုထား ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Super Mario 64 ဂိမ်းကို တစ်နေ့ နာရီဝက်နဲ့ ၂ လခန့် ဆော့တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ the right hippocampus, the right prefrontal cortex, the right cerebellum အပိုင်းတွေမှာ ပိုမိုကြီးမား လာတာ တွေ့ရှိ ရပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ ဒီအပိုင်း တွေဟာ memory formation, strategic planning, muscle control နဲ့ spiral navigation လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Max Plank Institute for Human Development and Charite University Medicine St.Hedwig-Krankenhaus က လေ့လာသူတွေဟာ volunteers တွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို MRI နဲ့ တိုင်းတာပြီး ဂိမ်းမဆော့တဲ့ သူတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီအဖွဲ့ နှစ်ခုကြားမှာ ဂိမ်းဆော့တဲ့ သူတွေရဲ့ ဦးနှောက်မှာ grey matter တွေသိသိ သာသာ တိုးလာတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဒီတွေ့ရှိချက် အရ ဂိမ်းဆော့ ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို ကုသဖို့ အထောက်အကူ ပြုမယ်လို့ မျှော်လင့်ထား ကြပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် ဂိမ်းကစား ခြင်းကို training အနေနဲ့ ပေးပြီး စိတ်ရောဂါ တွေဖြစ်တဲ့ smaller hippocampus and prefrontal cortex volume in post-traumatic stress disorder, schizophrenia နဲ့ neurodegenrative ရောဂါတွေကို ပြန်လည် ကုသရာမှာ အသုံးချ နိုင်ပါတယ်။
လေ့လာသူ တွေပာာ ဦးနှောက် အရွယ်အစား ကြီးမားခြင်းဟာ လူတစ်ယောက် ပိုမိုထက်မြက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်နေလား ဆိုတာကို အငြင်းပွား နေဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် တချို့သော ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း တွေပိုကြီးမား တာဟာ အသုံးဝင် တယ်လို့ လက်ခံထား ကြပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆို Albert Einstein ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ သာမန် လူတယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ထက် အရွယ်အစား ကြီးမားပါတယ်။ gray matter ပိုမို များပြားလာ တာဟာ ဦးနှောက် မှတ်ဥာဏ် ကောင်းဖို့ အထောက်အကူ ပြုပြီး gray matter နည်းလာခြင်းဟာ bipolar disorder နဲ့ dementia ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွား တာနဲ့ ဆက်စပ်နေ ပါတယ်။ နောက်အချက် တစ်ချက် ကတော့ volunteer တွေထဲ မှာမှ ဂိမ်းကို ကြိုက်နှစ်သက် စွာကစား တဲ့သူတွေဟာ gray matter ပိုမိုများပြား လာတာတွေ့ ရပြီး ဒီ့အတွက် ကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တချို့ဟာ သင်ဂိမ်း ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်လဲ ဆိုတာနဲ့ ဆက်စပ်နေ ပါတယ်တဲ့။ ကဲ ဒီလောက် ဆိုရင် ဂိမ်းကစား တာဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် Entertain ment တစ်ခု ဆိုတာထက် ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ် ရှိတယ် ဆိုတာကို သက်သေ ပြဖို့ ပိုမိုနီးစပ် လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
" ဘိန်း "
Posted by drmyochit Monday, November 25, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ခေတ်သစ်ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်တစ်ထောင်၏ အမြင့်ဆုံးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့် သို့ရောက်ရှိနေပြီး၊ ယင်းတို့အထဲတွင်အပင်၏မော်ဖင်းဓါတ်ပါဝင်မှု၊ထုတ်ယူမှုနှင့်အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်မှု နည်းပညာများနှင့်သုံးစွဲမှုနည်းပညာများတို့သည်ပို၍အစွမ်းထက်မှုဖြစ်လာစေသည်။ အစားအစာ၊မေ့ဆေးနှင့်ရိုးရာဓလေ့ကိစ္စရပ်များအတွက်ဘိန်းပင်စိုက်ပျိုးမှုသည်
ဘိန်းကို ရှေးခေတ်က အများစုလေးစားလောက်သော ဆေးပညာကျမ်းစာအုပ်များတွင်ဖော်ပြထားပြီး အီဘာပါပီရပ်စ်နှင့် ဒိုင်အိုစကိုရိုက်၊ ဂဲလင့်နှင့် အေဗွီဆင်းနားတို့၏ ရေးစာများတွင်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မော်ဖင်းနောက်ပေါ်လာသည့် ဆေးများမပေါ်သေးမှီ၊ မပြုပြင်ရသေးသော ဘိန်းကို ဆေးဘက်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးလာခဲ့သည်မှာ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်တစ်လျှောက်အထိ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မော်ဖင်းနှင့်နောက်ပေါ်သည့် ဆေးများကို တိတိကျကျ ထိန်းချုပ် ထားသည့်ဆေး အချိန်အဆ တိုင်း ထိုးသွင်း နိုင်ခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်တွင်ဆယ်ငါးရာစုနှစ်မှစပြီး၊ဘိန်းကိုအပန်းဖြေသဘောဖြင့် သုံးစွဲလာခဲ့သော်လည်း၊ ပစ္စည်းရှားပါး မှုနှင့် ဈေးကြီးမှုတို့ကြောင့် အကန့်အသတ်ရှိခဲ့သည်။ ဆေးရှုရန်အတွက် ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ရော၍သုံးစွဲခဲ့သည့် ဆယ့်ခုနှစ် ရာစုနှစ်တွင်ဘိန်းကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုသည် ပိုမို၍ ပုံမှန်ဖြစ်လာပြီး၊ ဘိန်းစွဲမှုကိုပါ ပထမဦးဆုံး သိမြင်မှတ်သား လာခဲ့သည်။ဘိန်းပိတ်ပင်တားမြစ်မှုကို တရုတ်ပြည်တွင် ၁၇၂၉ မှ စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း၊ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာ နီးပါးအတွင်း ဘိန်းသုံးစွဲမှုမှာ တိုးတက်မြင့်မားလာခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်သည် ဗြိတိသျှနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင် ငွေပေးငွေယူရှင်းတမ်း ၌ ပိုငွေပြခဲ့ပြီး၊ ဗြိတိသျှတို့ ၏ ငွေဒင်္ဂါများကို လျော့နည်းလာစေသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဗြိတိသျှသည်တရုတ်ပြည်ဘိန်းသုံးစွဲမှုကို အားပေးခြင်းဖြင့်၊ ၎င်း၏ကုန်သွယ်ရေး ချိန်ခွင်လျှာညီမျှစေရန်အတွက် ဗြိတိသျှထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်ရှိသော အိန္ဒိယပြည်နယ်များမှ တစ်ဆင့် တရုတ်ပြည်သို့ဘိန်းများတင်သွင်းဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်ဘုရင်သည် ပြည်တွင်း၌ ဘိန်းများစီးဝင်နေမှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်၊ ဘိန်းအမြောက်အများကို
ဖမ်းဆီးသိမ်းပိုက်လိုက်သဖြင့် ၊ ဘိန်းစစ်ပွဲများ ၁၈၃၉ တွင် တစ်ကြိမ် နှင့် ၁၈၅၈တွင်တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားရသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး၊ ထိုစစ်ပွဲတွင် ဗြိတိသျှမှ တရုတ်ပြည်အပေါ် အင်အားသုံး၍ တစ်တိုင်းပြည်လုံးသို့ ဘိန်းများကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်စေခဲ့သည်။ ၁၈၆၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၊ ဘိန်းသုံးစွဲမှုသည် ပြည်တွင်းဘိန်းထုတ်လုပ်မှုကျယ်ပြန့်တိုးတက်လာခြင်းအတူဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပြီး၊ ၁၉၀၅တွင် ပုံမှန်ဘိန်းသုံးစွဲသူများသည် အမျိုး သားလူဦးရေ၏ လေးပုံတစ်ပုံကျော်သည်အထိရှိလာခဲ့သည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင် စိတ်ပြေလက်ပျောက် သို့မဟုတ် စွဲလမ်းမှုကြောင့် ဘိန်းသုံးစွဲခြင်းသည် ဆယ့်ကိုးရာစုနှစ် နှောင်းပိုင်းအရောက်တွင် အနည်းအကျဉ်းမျှလောက်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။ အမြင်နှစ်မျိုးထွက်စေသော စာပေတစ်ခုမှ မှတ်သားထားရှိခဲ့သည်မှာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဘိန်းကို ချီးမွှမ်းခန်းဖွင့်ထားသည်။
ဘိန်း၏ ကမ္ဘာနှင့် အဝန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည် တရုတ်အခြေချလာရောက်နေထိုင်သူများနှင့် ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ ဘိန်းခန်းများ၏ သိက္ခာမဲ့အမှတ်အသားနှင့်အတူ စတင်လာခဲ့ပြီး၊ ၁၈၇၀ခုနှစ်များတွင် မြို့နယ်ရုံးများအဆင့်မှ ၁၉၀၉ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘိန်းကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရသည်အထိလျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ သည်။ ဤကာလအတွင်း စာပေတွင် ဘိန်း၏ရုပ်ပုံလွှာသည်ညစ်ပေစုတ်ပြတ်ခြင်းနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းများအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှဘိန်းကုန်သွယ်မှုကို တရုတ်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမှ မသမာသောနည်းများ ဖြင့် အကြီးအကျယ်နေရာလုယူခဲ့ပြီးနောက်သန့်စင်ပြီးမော်ဖင်းနှင့်ဟီးရိုးအင်းတို့သည်ဆေးထိုးရန်အတွက်ကျယ်ပြန့်စွာရရှိလာစေခဲ့ပြီးဘိန်းပါသည့်မူပိုင်ဆေးများသည်လူအများကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း ၏အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဘိန်းကို နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်၏အစောပိုင်းကာလများအတွင်း နိုင်ငံအများစုတွင်
ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြပြီး တရားမဝင် စိတ်အပန်းပြေစရာမူးယစ်ဆေးအတွက် ဘွေဆော်ဦးပစ္စည်းအဖြစ်ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု၏ခေတ်သစ်ပုံစံသို့မဟုတ် တရားဝင်ဆေးစာဖြင့်သာသုံးရမည့်ဆေးများဟုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ရခြင်း များအထိ
လက်ရှိတွင် တရားမဝင်ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု လွှမ်းမိုးထားသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသည် ၂၀ဝဝ ခုနှစ်တွင် တာလီဘန်များမှ ထုတ်လုပ်မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့စဉ်အချိန်တွင် သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့သော်လည်း ၂၀ဝ၁ ခုနှစ် တာလီဘန် ကျဆုံးချိန်ကတည်းက နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲလမ်းကြောင်းအပေါ်တွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်လာခဲ့ သည်။၂၀ဝ၆ ခုနှစ်
တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုသည် မက်ထရစ်တန် ၆၆၁၀ ဖြင့် ၁၉၀၆ခုနှစ် ထုတ်လုပ်မှု၏ငါးပုံတစ် ပုံနီးပါးမျှရှိသည်။ တရားမဝင်သုံးစွဲမှုအတွက် ဘိန်းကို ရံဖန်ရံခါ ဟီးရိုးအင်းအဖြစ်သို့ ဟြေင်းလဲပစ်သည်။ ဟီးရိုး အင်းသည် ဝန်ကျဉ်းပြီး မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ရန် လွယ်ကူစေသည်။ ဟီးရိုးအင်း၏အစွမ်းထက်မှုကို ထပ်ဆင့်ပွားစေခြင်းဖြင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မော်ဖင်းသတ္တိနှစ်ဆရှိသည်အထိ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဟီးရိုးအင်းကို သွေးကြောသွင်းခြင်း ၊ နှာခေါင်းအစက်ချခြင်း နှင့် အငွေ့ပျံစေခြင်းတို့ဖြင့်လည်း သုံးစွဲနိုင်သည်။
ဗဟုသုတ ရရန်အလို့ဌာ မျှဝေပါသည်။
တရုတ်-ဂျပန်၊ တရုတ်-အမေရိကန် အားပြိုင်မှုများအကြား အ...
ချောမွတ် နူးညံ့ အမွှေးအမျှင် ကင်းစင်တဲ့ အသားအရေကို ...
ဂိမ်းကစား တာဟာ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို ပိ...